Esenler ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရှိအဆောက်အအုံများပြိုပျက်သည် - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်စွန့်ပစ်အဆောက်အဦး Esenler ဘတ်စ်ကားဘူတာထဲမှာဖြိုဖျက်ခဲ့ကြ
02 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဗွီဒီယို 0
စွန့်ပစ်အဆောက်အအုံများအတွက် esenler ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံဖြိုဖျက်ခဲ့ကြ
ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံများတွင်အခြားရည်ရွယ်ချက်များစွန့်ပစ်လျက်, နိမ့်ကြမ်းပြင်ပြီးစီးခဲ့ပြီအတှကျအသုံးပွုဒေသများ၏ IMM Esenler ဖကျြဆီးခွငျးအားဖွငျ့အမွေဆက်ခံ။
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), ဇူလိုင်လ9စက်တင်ဘာလ 15 ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပူပဒေသများအထိသန့်ရှင်းရေး, အဘတ်စ်ကားဘူတာ (Esenler) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။
အဆိုပါ 62 ယူနစ်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်ပြင်ပလယ်ကွင်းများနှင့်အောက်ပိုင်းကြမ်းပြင်၏အသုံးပြုမှုကိုတားဆီးနိုင်ရန်အတွက်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံပျက်စီးခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစတင်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 27 ပြီးစီးခဲ့BİMTAŞကကောက်ယူလေ့လာမှုရဲတပ်ဖွဲ့ IMM နှင့် IMM လက်အောက်ခံ။
ကြိုတင်ဇူလိုင်လ Ekrem İmamoğluအတွက်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ၏အာဏာသိမ်းမှုမှခရီးစဉ်အတွက် IMM သမ္မတ, ငါ့မိသားစု "လစျြလြူရှုခြင်းနှင့်အောက်ပိုင်းကြမ်းပြင်ပေါ်အဆိုးဆုံးပုံရိပ်တွေသကျသခေံကြှနျတေျာ့ဇနီးကဒီမှာရိုက်ထည့်လို့မရပါဘူး။ ဘယ်သူမှ၏ဇနီးနှင့်ကလေးယုံကြည်မှုကဒီမှာရိုက်ထည့်မရဘူး "ဟုသူကပြောသည်။
ဘတ်စ်ကားဘူတာမှာရပ်နားအများကြီးလွှဲပြောင်းİSPARKယခင်က IMM ISTAÇအသင်းများအားဖြင့်ရှင်းလင်းဖုန်ကနေနိမ့်ကြမ်းပြင်, လွန်ဘဲ, IMM နှင့် IMM ၏လုံခြုံရေးİSTGÜVလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ပေးခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။
IMM, Esenler သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကိုလွှတ်ချင်ခဲ့တယ် 23 / 08 / 2016 IMM, Esenler သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံလွှတ်ပေးရန်လိုချင်: အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Metro Holding ကုမ္ပဏီအားဖြင့်စာချုပ် operated Esenler'deki အတွက် သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံပယ်ဖျက်ခဲ့ပါရေးသားခြင်းအားဖြင့်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံရွှေ့ပြောင်းစေခြင်းငှါစေလွှတ်ခဲ့သည်။ မြူနီစီပယ်, စီမံခန့်ခွဲမှု 15 ရက်ပေါင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ Metro Holding ကုမ္ပဏီဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ Galip Öztürk, ဆိုရှယ်မီဒီယာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြေညာခဲ့သည်တုံ့ပြန်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Metro Holding ကုမ္ပဏီအားဖြင့်စာချုပ် operated Esenler'deki အတွက် သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံပယ်ဖျက်ခဲ့ပါရေးသားခြင်းအားဖြင့်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံရွှေ့ပြောင်းစေခြင်းငှါစေလွှတ်ခဲ့သည်။ မြူနီစီပယ်, စစ်ဆင်ရေး "သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်" ကိုကုမ္ပဏီ 15 ရက်ပေါင်းမိတ်ဆက်ပေးစေခြင်းငှါ, မြေပေါ်တွင်စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Metro ဦးပိုင်ကယ်ဆယ်ရေးဘတ်စ်ကားဘူတာရုံနေဖြင့်စာချုပ် FeSi operating Esenler'deki အတွက် သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံ ...
သူİmamoğluBayrampaşa Esenler ဘတ်စ်ကားဘူတာကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်: 'ဘယ်သူမှရဲ့မိသားစု Giremez ဤနေရာတွင်' ' 19 / 07 / 2019 IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သိမ်းသွားလေ၏၏ပြဿနာများသည်သွေးထွက်ဒဏ်ရာ၏မြို့ရဲ့ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံBayrampaşaကိုနားထောင်ပြီးနောက်, ခရိုင်မြို့တော်ဝန် Atila Aydin နှင့်အတူအကြိမ်ပေါင်းများစွာခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အထူးသဖြင့်မသက်မသာဗြဲထိုကဲ့သို့သောနေရာတစ်နေရာငါ့ကလေးမဝင်နိုင်ပါဘူး "နိမ့်ကြမ်းပြင်ပေါ်အနုတ်လက္ခဏာအမြင်များİmamoğluမျက်မြင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော့်ဇနီးမဝင်နိုင်ပါဘူး။ သင်ဒီမှာကျွန်တော့်ဇနီးထဲသို့ဝင်ပုံကိုကလေးများ 16 သန်း၏အစ္စတန်ဘူလ်, အိုးငါ့ကလေးဟမ်တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားတ၏မယားကိုအဘယ်သူမျှမကမိသားစုဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အတူအခက်အခဲရှိသည်။ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ယင်း၏ function ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ "အင်း, ငါတဦးတည်းကအရမ်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းစာတမ်းပေါ့ဘယ်လောက်ရှည်ရှည်အဘို့မေးခွန်းများ၏အသွင်ပြောင်းဖို့İmamoğlu, သတင်းစာဆရာများ, Techno အမျိုးအစားဘတ်စ်ကားဘူတာ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါအချိန်ပေးချင်ကြဘူး။ တတိယ ...
"Eskişehirမီးရထားအဆောက်အဦး: စက်မှုအမွေအနှစ်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ" ကိုဖွင့်ပြပွဲ 20 / 11 / 2017 ဗိသုကာပညာနှင့်ဒီဇိုင်းဌာန၏ Anadolu တက္ကသိုလ်ဌာန, ဗိသုကာပညာဦးစီးဌာနအလုပ်အမှုဆောင်ဒြေအဖွဲ့ဝင်များက "Eskişehirမီးရထားအဆောက်အဦး: စက်မှုအမွေအနှစ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများသည်" ၌ကျင်းပကျောင်းသားအလုပ်ပြပွဲဖြစ်ပါသည်, တူရကီပြည်နယ်မီးရထားလှည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာဖွင့်လှစ်။ အဖွင့်မိန့်ခွန်း, ဗိသုကာပညာနှင့်ဒီဇိုင်း၏ဌာန၏ပါမောက္ခဒင်း ဒေါက်တာ Alper လျင်မြန်စွာ "မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေးကိုတည်ဆောက်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်သည်အထိအသုံးပြုပြီးနောက်အသစ်သောဥပစာသို့ပြောင်းရွှေ့သည့်လှည်းပြုပြင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုatölyerစွန့်ပစ်ခံခဲ့ရပါကလျစ်လျူရှုနေဖြင့်စွန့်ပစ်ခံခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်ဖြစ်လာသည်ရထားလမ်းတစ်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း။ အများမြင်အောင်သည်ဤနေရာများပယ်မြို့တော်ရဲ့စက်မှုအမွေအနှစ်များအားဖြင့်အမှု၏အစွမ်းထက်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်။ " တိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်လှည်းပြုပြင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဟု ...
ကတ္တရာလမ်းမမြို့တော်အတွက်အဆောက်အဦးများရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရသည်ချုံ့ထား 30 / 03 / 2015 မြို့တော်လက်ဝဲအတွက်ပြိုကျအဆောက်အဦးအောက်၌ကတ္တရာလမ်းမကြီးရေ: အဓိကပိုက်လိုင်းများ၏ကှဲထှကျပတျဝနျးကငျြအဆောက်အဦးများနှင့်ဥယျာဉ်ရေလွှမ်းပြီးနောက်တူရကီမြေအောက်ရထားဘူတာရုံများတွင်İvedikကြောင့် adjoining ကတ္တရာလမ်းများတွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းဖို့ပြိုကျ, ငါတို့နေ၏။ အဆိုပါကတ္တရာလမ်းİvedikမြေအောက်ရထားဘူတာရုံကပ်လျက်တူရကီ၏ Yenimahalle ခရိုင်, မိုးရေချိန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာပြိုကျ။ အဓိကပိုက်လိုင်းများ၏ပြိုကျပြီးနောက်ဤနေရာတွင်မှတဆင့်ခြိုးဖောကျ၏ရလဒ်ပတျဝနျးကငျြအဆောက်အဦးများနှင့်ဥယျာဉ်ရေလွှမ်းရေတန်ချိန်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ကြီးမားသောသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်လမ်းလည်း, ညဦးယံ၌İvedik Yenimahalle ခရိုင်လာမယ့်မက်ထရိုဘူတာ, Ersever လမ်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ လမ်း၏တစ်ဖက်အပေါ်တစ်နေ့တာအတွင်းအရာထိရောက်သောမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၏ရလဒ်အဖြစ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: န်ဆောင်မှုများ (ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုTavsanlıအဆောက်အအုံများ, outbuildings နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့စက်ခေါင်း) ဖြစ်လိမ့်မည်ပျော်စေ 06 / 01 / 2016 ဝန်ဆောင်မှုပျော်စေ STATE ရထားလမ်း Administration7၏ TC TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒေသန္တရရုံး TCDD ညွှန်ကြားမှုTavsanlıဂိုဒေါင်အဆောက်အဦးများ, ဝုဏ်နှင့်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်စက်ခေါင်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်ဝယ်ယူရန်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 183843 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Alicetinkaya Mah ။ Silom လမ်း CAD ။ အမှတ်2/ 1 03030 ဗဟို STATION ကို / AFYONKARAHİSARခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621 - 2722141943 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: နုစာရွက်စာတမ်း၏ tcddihalekomisyonuafyon@mynet.co ငါ d) ကအင်တာနက်လိပ်စာမြင်နိုင်ပါသည်: အ https: //ekap.kik.gov.t နု၏ ​​/ ECAP / 2-service ကိုဘာသာရပ် ...
IMM, Esenler သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံကိုလွှတ်ချင်ခဲ့တယ်
သူİmamoğluBayrampaşa Esenler ဘတ်စ်ကားဘူတာကိုခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်: 'ဘယ်သူမှရဲ့မိသားစု Giremez ဤနေရာတွင်' '
"Eskişehirမီးရထားအဆောက်အဦး: စက်မှုအမွေအနှစ်များအတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ" ကိုဖွင့်ပြပွဲ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: န်ဆောင်မှုများ (ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုTavsanlıအဆောက်အအုံများ, outbuildings နှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့စက်ခေါင်း) ဖြစ်လိမ့်မည်ပျော်စေ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: န်ဆောင်မှုများပါလိမ့်မည်ပျော်စေ (Eskisehir အဆောက်အဦပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှပိုင်ဆိုင်)
အနုတ်လက္ခဏာကိုအကျိုးသက်ရောက်ယာဉ်အသွားအလာ Flow အဆောက်အအုံ Bursa အတွက်ဖြိုဖျက်နေသည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပြီးပြီ Tec-ကွိုင်မူကွဲနည်းပညာဆိုင်ရာအဆောက်အဦးလုပ်ငန်း